घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू बेल्जियम फुटबल खेलाडीहरू एक्सेल विट्सेल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरी फुटबल प्रतिभाशाली प्रस्तुत गर्दछ जसले सबैलाई उपनामद्वारा चिनिन्छ; "Chaloupe"। हाम्रो एक्सेल विट्सेल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खातालाई उनीहरूको बचपनको समय सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा उनीहरूको बारेमा प्रसिद्धि, सम्बन्ध जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि र धेरै बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनको बल नियन्त्रणको बारे जान्दछन् र मिडफील्ड क्षमताहरू पाउँछन्। तथापि, एक्सेल वेट्सलको बायोको बारेमा मात्र केहि हातका प्रशंसकहरू धेरै चिन्तित छन्। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Axel Witsel बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक र पारिवारिक जीवन
एक्सेल लरेन्ट एन्जल लामिबर्ट विट्ससेल जनवरी 12 को 1989th मा आमाबाबुलाई जन्मियो; आमा, सिल्वी विट्सेल र बुबा, बेरीरी विट्सेल, बेल्जियम, सुन्दर शहर लेजेमा।
अक्स एक मिश्रित-दौड र मायालु पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएको थियो। तिनका जोसिलो मायालु आमाबाबुले छोराछोरीसित प्रारम्भिक उमेरमा गर्थे। तलका चित्रमा बेल्जियम हो र तिनको बुबाले मार्टिनिकको फ्रान्सेली क्यारिबियन टापुमा जड राख्छन्। दुबै छोराछोरीहरूसँग प्रारम्भिक उमेरमा थिए।
एक्सेल विट्ससेल उनको एक र एकमात्र बहिनीको नाम हो जसको नाम व्हिटनी विट्सेलले जान्छ। बेल्जियमको सेतो मातृभाषाको बावजूद, दुवै बच्चा जन्मेको उनीहरूको बुबाको जीनमा जन्मिएका थिए त्यसैले उनीहरूलाई बेल्जियम कालो नस्लका सदस्यको रूपमा समूहबद्ध गरिदिए।
बढ्दो, अन्नी सेक्लले, प्रेमको एक ठूलो महसुसलाई सचेत पारेको खुल्ला पङ्क्तिहरू जो भाइ बहिनीहरू आमाबाबुबाट जन्मिएका थिए धन्यवाद। स्वाभाविक रूप देखि, एक्से एक केटाकेटी को रूप मा उनको खुट्टा मा फुटबल भएको छ र एक शौक र उपहार को रूप मा केवल फुटबल प्यार गर्दछ।
तिनका आमाबाबुहरूले उनलाई खुला पिचहरूमा खेल्न अनुमति दिए तर उनको छोराले फुटबललाई गम्भीरतापूर्वक लिने विचार गरेनन्। यो सीमित अवसरहरूको कारण थियो त्यस बेला बेल्जियम फुटबल प्रदान गरियो। एक्सेलले यसलाई राख्छ।
'जब म साना हुन्थेँ, केवल फुटबलमा कुनै खेलहरू थिएनन्। म मेरो पिताले गरेको सबै कुराको लागि पूर्णतया कृतज्ञ हुँ। उहाँले सधैं मलाई धक्का दिनुभयो। उनको बिना, मलाई यो अविश्वसनीय यात्रा छैन जुन म अहिलेसम्म छु। '
एक्कल 15 वर्ष थियो जब उनले स्थानीय पिचहरूमा साथीहरूसँग खेल्न छोड्ने निर्णय गरे। उनले एक मौकाको लागि धन्यवाद कि मानक लीजको साथ पेशेवर जाने मौका पाएको उनले रोयल बेल्जियम फुटबल एसोसिएशन कोषबाट प्राप्त गरे। मानक लीजको साथ उनको संलग्नताको लागि बिल्डअप तल वर्णन गरिएको छ।
Axel Witsel बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यारियर बिल्डअप
देर-1990 को समयमा, बेल्जियमले फुटबलको उत्साहको नयाँ लहरलाई खेलमा क्रान्तिको सामना गर्यो। केवल 11m को जनसंख्या संग देश 1998 मा एक जलविद्युत पल थियो जब उनको राष्ट्रीय टीम को निराशाजनक 1998 विश्व कप समूह टूर्नामेंट देखि बाहिर दुर्घटनाग्रस्त भयो।
उनीहरूको निष्कर्ष एक थियो कि त्यहाँ विजेता र विकास मा पर्याप्त छैन मा धेरै धेरै जोर थियो। यसले बेल्जियममा युवा फुटबलको क्रांतिको नेतृत्व गर्यो। फुटबल क्लबहरू आर्थिक रूपमा बढेका छन् जसले देश भित्रै आफ्नो स्काउटिंग नेटवर्कलाई प्रभाव पार्छ। यो एक्सेलले मौका पायो जब स्काउट्सले उनको गृहनगर क्लब, मानक लीज को लागी खेल्न थाले।
Axel Witsel बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
धेरै फुटबलर्सहरूको विपरीत जो आफ्नो युवा क्यारियरको शुरुवात (प्रारम्भिक6सम्म 8) सुरु भयो, एक्सेल एक युवा क्लबको नयाँ अपेक्षाकारक युगमा अपेक्षाकृत उमेरको उमेर (उमेर 15 उमेरमा) भयो। उनीहरूको विकासको लागि एक उदार वृद्धि भयो र क्लबको वरिष्ठ टोलीमा सामेल हुन्थ्यो। एकपटक मात्र एक जना फैंसी थियो। पछि, उनले बललाई डोऱ्याउन र रक्षाकारहरूको रक्षा गर्न सबैभन्दा राम्रो थियो। यस गुणको बारेमा साक्षात्कार गर्दा उनले भने।
म सधैं यो जस्तै थियो, म एक बच्चा थियो पछि बल दिँदै - म बल धारण गर्न मन पर्छ र यो ढाल। यो मेरो बलियो पक्ष मध्ये एक हो - जान्छ कि मेरो शरीर कसरी प्रयोग गर्ने मेरो सँधै मेरो शैली थियो।
एक्सेलले सफलतापूर्वक सबै युवा रैंक्स बाहिर गए र गृहनगर क्लबमा आफ्नो सेयर क्यारियर सुरु गरे। एक्सेलले पाँचवटा ट्राफिकहरू जित्दा 183 उपस्थितिहरू र 42 लक्ष्यहरू स्कोर गर्दै। त्यहाँ दुई उल्लेखनीय क्षण थिए जहाँसम्म उनको प्रसिद्धिको सम्बन्ध चिन्तित थियो। पहिलोपटक उहाँले 2008 मा बेल्जियम गोल्डन जूतालाई सम्मानित गर्नुभयो।
दोस्रो थियो जब उनले 2007 / 08 अभियान मा युवा फुटबलर को वर्ष पुरस्कार जीता।
एक्सेल वेट्सटल उनको उपलब्धि संग बेल्जियम को सबै भन्दा सफल र एक प्रकार को खेलाडी पछि बन्यो। जस्तै Romelu Lukaku, केविन डी ब्रुने र ईडन हजर्ड, एक्सेल बेल्जियम गोल्डेन युग फुटबल खेलाडीहरूको बफादार सदस्य बने। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
Axel Witsel बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
हरेक महान मानिसको पछि, एक ठूलो महिला छ, वा यसो भन्दै जान्छ। र लगभग हरेक सफल बेल्जियम फुटबलर पछि, त्यहाँ ग्लैमरस पत्नी वाग वा प्रेमिका हो।
एक शक बिना, एक्सेल विट्ससेल को शैली को खेल को रूप मा राम्रो तरिकाले उनको जीवनशैली पिच उनको पूर्ण चित्र बनाइयो। एक्सेल राफाला साज्बो संग सम्बन्ध मा रहेको छ जो रोमानिया मा हंगेरी जडहरु संग जन्म भएको थियो। उनी दुई वर्ष पुरानो हुँदा बेल्जियम गए।
6 मा घन्टहरू टाई गर्ने निर्णय गर्नु अघि 2015 वर्षका लागि Rafaella र Axel दुवै उल्लेख गरिएको छ।
तिनीहरूको विवाह अहिले दुई प्यारी छोरीहरूसँग आशिष् दिईरहेको छ जसले एक्सेल वेट्सेल परिवारको हालका सदस्यहरू छन्। एक्सेलको सबैभन्दा ठूलो बेटीको नाम मे-लि विट्सेल हो।
Axel Witsel बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -रिच पारिवारिक पृष्ठभूमि निर्माण गर्दै
2017 मा, एक्सेल विट्सेलको निर्णयले चीन सुपर लिगबाट एक आकर्षक प्रस्तावको पक्षमा जर्ननसमा पुग्ने निर्णयलाई विश्वभरको वरिपरि प्रशंसकहरू मिलायो। साक्षात्कार भएको विटेलले उनी आफ्नो परिवारको लागि उत्कृष्ट छनौट गरे।
चीनको पैसा स्वीकार्ने उनको कारण € 18 मिलियन प्रति वर्ष एउटा धनी एक्सेल वेट्सेल परिवारको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएको थियो जसले वित्तीय स्थिरता र आनन्दको दशकहरू सुनिश्चित गर्नेछ।
एक्सेल जेनेभियस द्वारा उनको '4.5 मिलियन-प्रति-वर्ष जेनेटमा €3मिलियन प्रति वर्षको अघिल्लो वेतनको तुलनामा चल्न सकेन। यदि उनले स्वीकार गरेका थिए भने, उनले टूर्नामेंट जित्ने वास्तविक शटको साथ चैंपियंस लीग पछाडी दौडमा खेल्ने ऐतिहासिक इतिहासको युरोपेली टीममा सामेल हुन सक्नेछन्। यसको सट्टा, उहाँले 2006 मा स्थापना भएको चीनको टियांजिन क्वानजियानको लागि साइन इन गर्न चुनेको छनौट भयो। कार्लोस Tevez, एक वार्षिक वेतन को लागी जो जेएनभ्युमसले उनलाई प्रस्ताव गरे भन्दा4समय भन्दा बढि थियो।
टियांजिनमा विट्सेलको स्थानान्तरणको घोषणा गर्दा सोशल मिडियाले उनीहरूलाई भागेको पैसा, पैसा कमाई, र एथलीटहरूको लागि आरक्षित प्रत्येक सूर्यमा सबै अपमानजनक अपहरण गरेको छ जसले अरुको आफ्नै वित्तीय भइरहेको छानबिन गर्न छनौट गर्दछ।
Axel Witsel बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -रक्षा
चीनमा उनको स्थानान्तरणको सन्दर्भमा प्रशंसकहरूबाट आरोप लगाउन Witsel जवाफको बारेमा सबै कुरा बिल्कुल उचित थियो। उहाँ आफ्नो परिवारको लागि उपलब्ध गराउन उत्प्रेरित हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो भविष्यको आश्वासन दिनुभयो; र किन त्यो हुँदैन?
उहाँका शब्दहरूमा ...
पहिले भन्दा बढी, फुटबल एक व्यवसाय हो। यो मुनाफा, मार्जिन, र कारोबार द्वारा संचालित छ। खेलाडीहरू समान रूपमा वस्तुहरू र कर्मचारीहरू छन्, व्यापार गर्न निस्क्रिय र ब्यालेन्स पानाको रूपमा निलम्बन र वित्त सम्झौता गर्छन्।
व्यापार संसारमा, नयाँ वेदीको लागि एक कदम जसले उनीहरूको वेतन सेकेन्ड sextupling कर्मचारीको नेतृत्व गर्नेछ बधाई र प्रशंसा संग स्वागत गरिनेछ। तर केही कारणले, यो भावनाले एथलीटहरूमा लागु लाग्दैन। खेलकुदहरू बाँकी संसारको तुलनामा फरक स्तरमा हुनु पर्छ?
खेलकुद र दिन बाहिर हेर्न खेलिरहेका समर्थकहरूको लागि, यो फ्याक्न गाह्रो हुन सक्छ कि फुटबल को यो सुन्दर खेल केवल एथलीटहरूको लागि केवल एक नौकरी हो।
जबकि धेरै शानदार खेलाडीहरू देखाउँछन् र अरूलाई मात्र खेलको प्रेमको लागि भीड़ मनोरञ्जन गर्दछ, यो एक आरामदायक जीवन बनाउन र एक परिवारको हेरविचार गर्ने एकमात्र राक्षस हो। प्रशंसकहरू प्राय: खेलकुद नायकहरूको माध्यमबाट भित्तामा रहन्छन्, र सुनेका छन् कि उनीहरूले खेलको लागि शुद्ध, अनावश्यक जुनून भन्दा सट्टामा उत्तेजित हुन्छन् जुन विशेष रूपमा सानो अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई मौका पाउने मौका दिन्छन्। पेशेवर एथलीटहरू।
यसको कारण, धेरै प्रशंसकहरूले यस कुरामा सहमति व्यक्त गरेका छन् कि विट्टलले निर्णयलाई सही अर्थ दिन्छ।
एक्सेल विट्ट्ल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत तथ्य Q & A
फुटबल को बाहिर तपाईंको शौक?
मेरो लागि फुटबल व्यवसाय हो। म पनि मनोरञ्जन गर्दछु। धेरै समय अघि मैले डीजे टर्नटेबल किन्। मलाई धेरै मित्रहरू छन् जसले डीजे हुन्, त्यसैले मैले यसको साथ केही खेल्न थाल्छु। समयको लागि मात्र यो मेरो लागि हो।
Axel Witsel बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -एक पल्ट रोकिएको थियो
विटेलले एक्सएनएनएक्सक्समा क्रोध चलाएपछि उनले एन्सेलेचट र मानक बीचको खेलको दौडान मार्किन वस्सेलवास्कीको पेटी तोडेनन्।
उनले घटनाको लागि आठ-मिलान प्रतिबन्धको सामना गरे र गुस्सेर एन्डरलेच्ट र पोल्याण्ड समर्थकहरूको धेरै मृत्युको खतरा पाए।
Axel Witsel बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -नस्लवाद
वर्ष पहिले, जेनेइट सेन्ट पीटर्सबर्ग समर्थक समूह गैर-सेतो र समलैंगिक खेलाडीहरु लाई टीम बाट बहिष्कृत गर्न को लागी। रूसी चैंपियनको सबैभन्दा ठूलो प्रशंसक समूह, Landscrona, एक खुला अक्षर मा भन्यो कि काले खेलाडीहरु जसको समूह एक्सेल विट्सेल थियो "जेनिटको गलालाई दियो"। तिनीहरूले थपे कि समलैंगिक खेलाडीहरू हुन् "हाम्रो महान शहरको अयोग्य".
तिनीहरूको नस्लवादको लागि रक्षामा, फ्यानहरू 'म्यान्निओले पढे:
"कालो जेनेट खेलाडीहरूको अभाव मात्र एक महत्त्वपूर्ण परम्परा हो जसले टोलीको पहिचानलाई कम गर्दछ र केहि पनि गर्दैन।"
आदर्श रूपमा, रूसी लीगका कालो खेलाडीहरू बन्दर च्याटहरूको लक्ष्य र केला फेंकन्छन्। Anzhi Makhachkala को क्रिस्टोफर Samba प्रशंसकहरूले उसलाई माला लगाए। अधिक त, जेनेट सेन्ट पीटर्सबर्गलाई उनीहरूको प्रशंसक चढाइएका मध्ये एक पछि रूसी फुटबल युनियन द्वारा सजाय गरिएको थियो रोबर्टो कार्लोस मार्च को 2011 मा दुई पक्षहरु को बीच एक खेल देखि एंजजी को केले को।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो एक्सेल विट्सेल बचपन स्टोरी प्लस अनगिन्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.